उनले बुधबार आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका थिए, ‘म ७ हजार मिटरबाट भर्खरै आधारशिबिर फर्किएको छु। यो काम निक्कै छिटो भयो। मलाई बिश्वास छ, हाइअल्टिच्यूडमा यहीँ तरिका उत्तम हो।’
Suvadin Desk 691 0
चुनावको जानकारी मोबाइल एपबाटै
स्थानीय तहको निर्वाचनको चासो हरेकलाई हुन्छ। दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचन हुने भएपछि अहिले मुलक चुनावमय बनेको छ। प्रविधिको विकाससँगै निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको जानकारी दिने उद्देश्यले म...
Yam Bahadur Bam 1.7k 0
सद्दामले २६ लिटर रगत दिएर लेखाएका थिए कुरान
इराकका पूर्वराष्ट्रपति तथा तानाशाह सद्दाम हुसेनको अन्त्य कसरी भयो? अधिकांशलाई त्यो थाहा छ। तर, उनका आनिबानी कतिलाई थाहा नहुन सक्छ। सद्धामलाई ठूला-ठूला आलिसान महल बनाउने सौख मात्र थिएन, त्यसका अतिरिक्त...
संसारकै अन्तिम सेतो गैंडा
संसारको दुर्लभ नश्लको अन्तिम सेतो गैंडा जोगाउने प्रयास थालिएको छ। केन्याको जंगलमा आफ्ना दुई पोथी गैंडाको साथमा बस्दै आएको यो सेतो नर गैंडाको उमेर ढल्किँदै गएको छ।
Suvadin Desk 351 0
वैशाखमा दुई वटा उल्का वर्षा
मौसमले साथ दिएमा वैशाख महिनामा नेपाली आकाशमा दुई वटा उल्का वर्षाको रमाइलो दृश्य देख्न पाइनेछ। नेपाल इस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईका अनुसार वैशाख ५ गतेदेखि सक्रिय भएको वीणा उल्का वर्षा...
नेपालमा कुन खोलानालामा कुन प्रजातिका माछा पाइन्छ? माछा कति संख्यामा छन्? तराई, पहाड र हिमालमा किन फरक प्रजातिका माछा पाइएको होला? साधारणता यस्ता प्रश्न बहसमा आउँदैनन्। ‘तर, जीवविज्ञानका लागि यी प्रश्न...
Ashok Adhikari 12.3k 94
नेपाली समाजमा आफूसँग भएका सामग्रीलाई हेला गर्ने प्रवृत्ति रहेको मनोजको विश्लेषण छ। तर, कोसिस गर्नेहरूलाई केही आवश्यक परे विल्ड नेपालले सहकार्य गर्ने उनले बताए। मनोजका अनुसार सन् २०२० देखि २०३० सम्ममा...
Ashok Adhikari 3.9k 5
अर्पणले अहिले ६० वटा वस्तु सजिलै स्मरण गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिसकेका छन्। गायनमा रुची राख्ने उनी शाकाहारी हुन्। चिया र सुपारी नखाने उनी ध्यान र अभ्यासले हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्मरण शक्ति बढाउन सक्न...
Ashok Adhikari 6.9k 0
यी पाँच कुराले घटाउँछ यौन उत्तेजना
कार्यालयमा आवश्यकता भन्दा बढी काम। घर आएपश्चात पनि काममै खटिने गर्नुभएको छ? यी सबै कारणले राति राम्रोसँग निदाउन सकिँदैन। निद्रा नलाग्दा शरीरमा स्ट्रेस हर्मौन बढ्छ। जसले तनावको मात्र समेत बढाइदिन्छ। यस...
अजिंगरलाई कसरी लाग्यो नशाको लत ?
अष्ट्रेलियाको प्रहरीले गतबर्ष एउटा लागुऔषध उत्पादन हुने अवैध ल्याबमा छापा मार्यो। त्यहाँ लागुऔषध तयार गरिने मेसिन र नगद रुपैया बरामद हुने अपेक्षा प्रहरीको थियो। तर, भइदियो उल्टो।
शून्यले गणितमा निम्त्याउने समस्याको कारण र समाधान...
नेपाली आर्किमिडिज एवम् सामथ्र्यको सिद्धान्तका प्रवर्द्धक नेपाली युवा वैज्ञानिक भविन्द्र कुँवरको अङ्कगणितसम्बन्धी अर्को अनुसन्धान पनि सफल भएको छ। ‘दुर्यान्तर’ नामक यन्त्रको आविष्कार र भौतिक विज्ञानको ज...
उत्तर कोरियाले उसको पूर्वी बन्दरगाहा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको अमेरिका र दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले क्षेप्यास्त्रले ६० किलोमिटरको दूरी पार गरेको जनाएक...
Suvadin Correspondent 3.7k 0
Suvadin Desk 5.7k 29
Suvadin Desk 7.9k 33
Suvadin Correspondent 4.2k 0
Suvadin Correspondent 376 0
Suvadin Desk 320 0
Govinda Luitel 9.1k 0